Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Tapitra sa mbola hitohy? | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Tapitra sa mbola hitohy?
Miandrandra fatratra izay mety ho fanambarana hataon’ny Filoham-pirenena na ny Praiminisitra amin’ny faran’ny herinandro ny maro. Raha tsy misy mantsy ny antony hafa dia tokony hisy izany tafa amin’ny vahoaka malagasy izany taorian’ny tapa-bolana farany nanohizana ny hamehana ara-pahasalamana. Hitohy sa ho tapitra hatreo ny hamehana ara-pahasalamana sy ireo fe-petra manaraka azy? Sarotra ny haminavina izay mety ho valin’izany. Izany rehetra izany anefa moa dia miankina betsaka amin’ny fahitana sy ny fanombanan’ny tomponandraikitra ny zava-misy eto amin’ny firenena. Raha jerena araka ireny tatitra faramparany ireny aloha dia azo lazaina fa mihatsara ny toe-draharaha. Efa mihena ny isan’ny mitondra ny tsimokaretina, indrindra ny isan’ny maty.
Na tiana na tsy tiana, azo lazaina fa nahomby amin’ny ankapobeny ny fomba nitantanana ny valanaretina teto amintsika na dia nisy aza ny lesoka madinidinika teny an-dalana teny. Tsy mbola vita ny ady kanefa kosa hita fa mizotra miandalana mankany amin’ny fandresena isika. Tsy maintsy ho tonga any ihany isika, indrindra raha tsy mivahavaha ny fifehezan-tenan’ny tsirairay. Maro mantsy ireo tanàna, na renivohitra any ivelany no niverina indray anaty fihibohana satria nanaovan’ny coronavirus tampodifohy.
Miainga amin’ny fifehezan-tenan’ny tsirairay mantsy no ahafahana miroso amin’ny fanafoanana ny fepetra rehetra manodidina ity aretimandoza ity na tsia. Raha mijery eny an-dalana rehetra eny isika dia efa maro ankehitriny no tsy mitondra intsony ny arovava-orona. Tsy mbola nisy anefa hatreto fanambarana ofisialy milaza ny fahafahana manajanonana izany fa dia fanapahan-kevitra manokana avokoa izay hita eny rehetra eny. Vao najanon’ny tomponandraikitra ny fampitana isan’andro ny tatitry ny CCO amin’ny ady amin’ny coronavirus dia efa tsy vitsy ireo nanala ny maska. Ny mpitandro filaminana rahateo koa tsy manasazy toy ny teo aloha intsony. Sanatria toy ny soavaly tapa-kofehy ny sasany ka zarany aza naheno izany fanatsaharana ny fandaharana izany hanalana koa ny maska. Isaky ny sabotsy sisa no handrenesana an-dramatoa mpitondra teny ka ho hita eo aloha ny tatitry ny zava-misy.
Efa nanambara ny filoha fa tsy maintsy ho resy ny Covid-19. Koa raha izany ihany, tsy aleo miadan-ko reniny toy izay mitsatsaingon-ko vantony? Amin’ny alahady mifankahita.